दलितले किन गर्छन् धर्म परिवर्तन ? | Alagdhar
घरबिचारदलितले किन गर्छन् धर्म परिवर्तन ?
व्यक्तिलाई समाजबाट बहिस्कार गरिन्छ वा एक्लो बनाइन्छ, उसले आफूले आफैंलाई तल्लो ओहोदाको व्यक्ति सोच्छ। उसले आफ्नो इज्जत, मानसम्मान, प्रेरणा सबै गुमाउँछ। यो अवस्थामा ऊ मरिमरि बाँचेको हुन्छ।
अघिल्लो लेखमाकामु प्रधानन्यायाधीश जोशी आइतबारदेखि बिदामा बस्ने
अर्को लेखमाकामु प्रधानन्यायाधीश जोशी बिदामा बसेपछि मिश्रले तोके पेशी